Ma Dong-seok – Stars – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
The Bad Guys: The Movie (2019) Unicode ဒီဇာတ်ကားဟာ OCN က ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ Bay Guy Series တွေ spin-off movie တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Bad Guy (2014) က Kim Sang-Joong နဲ့Ma Dong-Seok တို့ ပြန်ပါဝင်လာပြီး Search:WWWထဲက မင်းသားလေးချော Chang Ki-Yong လည်း ပါဝင်ထားပါတယ်။Rating က IMDB မှာ 6/10 နဲ့MyDramaList မှာတော့ 9.4/10 တောင် ရရှိထားပါတယ်။ အကျဉ်းသားတွေကို ပို့ဆောင်နေတုန်းမှာပဲ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ် မှောက်သွားပြီး အကျဉ်းတွေလွတ်မြောက်သွားတယ်။ လွတ်မြောက်သွားတဲ့ အကျဉ်းတွေထဲမှာ ယာကူဇာတွေအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့ ကိုရီးယားဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်လည်း ပါနေတယ်။ ဒါနဲ့ပြန်လည်ဖမ်းမိဖို့အတွက် စုံထောက်အဖွဲ့တစ်ခုကို ဖွဲ့ပေးတဲ့အခါမှာတော့......... ပရိတ်သတ်အချစ်တော် Ma Dong-Seok ကြီးလည်း ပါဝင်နေပြီဆိုတော့ကာ... Credit Review Zawgyi ဒီဇာတ္ကားဟာ OCN က ထုတ္လႊင့္ခဲ့တဲ့ Bay Guy Series ေတြ spin-off movie ...
IMDB: 6.1/10 988 votes
Champion (2018) Unicode ကိုရီးယား ဒရာမာဆန်ဆန် ဇာတ်လမ်းကောင်းတွွေကို ကြည့်ရှူချင်ကြသူတွေအတွက် ဝတုတ်မင်းသားလို့ခေါ်ကြတဲ့ ကိုရီယားမင်းသား Ma Dong-Seok ရဲ့ ၂၀၁၈ ထွက်ကားကောင်းတစ်ကားတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်…မာ့ခ် လို့ခေါ်တဲ့ ကိုရီယားလူမျိုး တစ်ယောက်ဟာ အကြောင်းတစ်ခုကြောင့် အမေရိကန်လူမျိုးမိသားတစ်စုရဲ့ မွေးစားခြင်းကိုခံရပြီး အမေရိကန် နိုင်ငံမှာပဲ ကြီးပြင်းခဲ့ပါတယ်..သူဟာငယ်စဉ်ကတည်းက လက်မောင်းလှဲအားကစားကို ရူးသွပ်ပြီး ချန်ပီယံတစ်ယောက် ဖြစ်ချင်ခဲ့တာပါ… ဒီလိုနဲ့အရွယ်ရောက်လာချိန်မှာ အမေရိကန် လက်မောင်းလှဲ အားကစားအသင်းတစ်ခုမှာ ဝင်ရောက်ကစားကာ အောင်ပွဲတွေဆက်တိုက်ယူနေရင်း အကြောင်းတစ်ခုကြောင့် ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပြီးနောက်မှာ သူဟာ ကလပ်တွေ ဘားတွေ စျေးဆိုင်တွေမှာ လုံခြုံရေးအဖြစ် ကြုံရာ လုပ်ကိုင်နေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်တစ်ရက်တော့ ညီအစ်ကိုလိုချစ်ခင်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ကိုုရီးယားမှာ လက်မောင်းလှဲပြိုင်ပွဲကြီးရှိတဲ့အတွက် သူ့ကို ကိုရီးယားကိုခေါ်ပါတော့တယ်….မာ့ခ်တစ်ယောက် ပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့ကိုရီးယားရောက်လာပြီး သူ့ရဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့မိသားစုကို ပြန်လည်ရှာဖွေရင်း ချန်ပီယံတစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်ပါမလား….။အရမ်းကိုကြည့်ကောင်းတဲ့ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပြီး အသည်းနုသူတွေအတွက် မျက်ရည်ဝဲစေမယ့်ကားလေးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်လို့ အာမခံပေးပါရစေ။ Credit Review Zawgyi ကိုရီးယား ဒရာမာဆန္ဆန္ ဇာတ္လမ္းေကာင္းေတြြကို ၾကည့္ရႉခ်င္ၾကသူေတြအတြက္ ဝတုတ္မင္းသားလို႔ေခၚၾကတဲ့ ကိုရီယားမင္းသား Ma Dong-Seok ရဲ႕ ...
Train to Busan (2016) Unicode ဒီတစ်ခါတော့ ဘူဆန်ရထားကြီး စီးချင်သူများစီးလိုက်ကြပါဦးနော် ။ Train To Busan ဇာတ်ကားဟာ ကိုရီးယားရဲ့ရုပ်ရှင်အတန်းဘယ်လောက်ထိမြင့်မားနေပြီလဲဆိုတာ မီးမောင်းထိုးပြလိုက်တဲ့ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ် ။တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ရုံတင်ပြသခဲ့ပြီး ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေကလည်း ကျွန်တော်တို့အမြင်မှာရင်နှီးပြီးသားဖြစ်သလို တစ်ချိန်က မြန်မာပြည် ကိုရီးယားရုပ်ရှင်လောကမှာ ကော်ဖီချစ်သူ ဇာတ်ကားနဲ့အောင်မြင်ကျော်ကြားလူကြိုက်များခဲ့တဲ့ ဝါရင့်မင်းသား Gong Yoo က ခေါင်းဆောင်မင်းသားနေရာကနေတာဝန်ယူ သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ဇာတ်လမ်းထဲမှာ မင်းသားက မိန်းမနဲ့ကွဲနေပြီး သမီးလေးနဲ့အတူ ဆိုးလ်မှာနေထိုင်ပါတယ်။ အလုပ်တွေအရမ်းလုပ်ပြီး သမီးလေးကိုအချိန်မပေးနိုင်တဲ့ဖခင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ သမီးလေးရဲ့မွေးနေ့မှာ ဇနီးဟောင်းနေထိုင်တဲ့ ဘူဆန်ကို သမီးလေးကို ခေါ်ကာ KTX ရထားနဲ့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ရောဂါပိုးကူးဆက်ခံနေရတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ ရထားမထွက်မီ စက္ကန့်ပိုင်းအလိုမှာ ရထားပေါ်ခုန်တက်လိုက်ပါလာရကနေ စပြီး ရထားတစ်စင်းလုံး ပြောင်းဆန်သွားပုံကိုမြန်မာစတန်းထိုးပြီးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ Credit - Review Zawgyi ဒီတစ္ခါေတာ့ ဘူဆန္ရထားႀကီး စီးခ်င္သူမ်ားစီးလိုက္ၾကပါဦးေနာ္ ။ Train To Busan ဇာတ္ကားဟာ ကိုရီးယားရဲ႕႐ုပ္ရွင္အတန္းဘယ္ေလာက္ထိျမင့္မားေနၿပီလဲဆိုတာ မီးေမာင္းထိုးျပလိုက္တဲ့ဇာတ္ကားတစ္ကားျဖစ္ပါတယ္ ။တစ္ကမာၻလုံးမွာ ႐ုံတင္ျပသခဲ့ၿပီး ...
IMDB: 7.5/10 103,602 votes
Ashfall (2019) Unicode လွန်ခဲ့တဲ့လ အနည်းငယ်ကတည်းက Cast အင်အားတောင့်တောင့်နဲ့ ပရိသတ်တွေကြား စိတ်ဝင်စားမှုခံခဲ့ရတဲ့ ကိုရီးယား ရုပ်ရှင် Ashfall ထွက်ရှိလာပါပြီ။ ကိုရီးယား Box Office မှာလည်း ကြည့်ရှုသူ ၈သန်းကျော် သွားပြီလို့ သိရပါတယ်။ ဒီလို Cast အင်အားတောင့်တောင့်နဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ကားက ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်း ကြည့်တဲ့သူရှိမှာပေမယ့် ဒီလောက်ထိ ကြည့်ကြတာတော့ နည်းနည်း ရှိန်ချင်စရာပါပဲ။ Plot ကတော့ ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ တောင်ပိုင်းရော မြောက်ပိုင်းရောကို ခြိမ်းခြောက်လာတဲ့ ငလျှင်အပေါ်မှာ အခြေခံထားပါတယ်။ မီးတောင်ကြောင့် မမျှော်လင့်ဘဲ ရုတ်တရက် မြေတွေပြို၊ တိုက်တွေပြိုရလောက်တဲ့7magnitude ကျော်တဲ့ ငလျှင်တစ်ခု လှုပ်ခတ်ရာကနေ ဇာတ်လမ်းစပါတယ်။ နောက်ထပ်လည်း ငလျှင် သုံးကြိမ်ထပ်လှုပ်ဦးမှာ ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးအခေါက် လှုပ်တဲ့ ငလျှင်ကိုသာ မတားနိုင်ရင်တော့ တောင်ရော မြောက်ရော ဘဝခါးသွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်မို့ နောက်ဆုံး ...
IMDB: 6.4/10 1080 votes
Flu (2013) Unicode ဒီဇာတ်ကားလေးဟာဆိုရင် 2013 ခုနှစ်ကကတည်း ထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် တလောကနာမည်ခဲ့တဲ့Train To Busan ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားလိုပဲ ဇာတ်လမ်းအစမှ အဆုံးထိ ရသမျိုးစုံစွာ ကြည့်ရှု့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ် ရုံတင်ခဲ့စဉ် အခါကလဲ အထူးအောင်မြင်ခဲ့ပြီး ကိုးရီးယား အနုပညာလောကရဲ့ ဆုပေါင်းများစွာကိုလဲ သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Train To Busan နဲ့ ယှဉ်ပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့ Train To Busan ထက် အများကြီးသာပါတယ် သရုပ်ဆောင်အင်အားပိုကောင်းပါတယ် ကုန်ကျစရိတ်ပိုမိုသုံးစွဲထားပါတယ် ရိုက်ချက်တွေပိုပြီးခမ်းနားပါတယ် ဇာတ်လမ်း စ လယ် ဆုံး ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ကြည့်ရှုရမှာပါ 528 အချစ် 1500အချစ် တို့အတွက် ပေးဆပ်မှုများကို ကြည့်ရင် မျက်ရည် မလယ်နိုင်အောင်ဖြစ်ခဲံရပါတယ် စိတ်ချ.……………တကယ့်မျက်ရည်ကျစေရမယ်ဇာတ်ကားကောင်းလေးမို့ ညွှန်းဆိုပေးလိုက်ပါတယ် စစချင်းမှာ ကကျိုးကကြောင်နိုင်တဲ့ အချစ်ဟာသဇာတ်လမ်းလိုလိုကနေ ဆေးဘက်ကပ်ဘေး ဇာတ်လမ်းဆီ၊ အဲဒီကနေတစ်ဖန် နာဇီငရဲခန်းတမျှ ကြောက်မက်ဖွယ် horror ဇာတ်လမ်း၊ ပြီးလို့ ဇာတ်ရှိန်အမြင့်ဆုံးနေရာရောက်ပြန်တော့ နိုင်ငံရေးအက်ရှင်ဇာတ်လမ်း ဖြစ်သွားပြန်ရော။ နိုင်ငံခြားကိုယ်စားလှယ်က ဘွန်ဒေါင်းတစ်မြို့ အတွက်နဲ့ တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ကူးစက်မခံနိုင်လို့ ကိုးရီးယားစစ်တပ်တွေက မပစ်ရင် နိုင်ငံတကာဗုံးကြဲလေယာဉ်တွေနဲ့ ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ဖို့ ...
IMDB: 6.8/10 5,007 votes
The Gangster, the Cop, the Devil (2019) Unicode ၂၀၁၉ တုန်းက ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ မာဒုန်ဆွတ်ရဲ့ ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ကားပါ Train to Busan ထဲက လူသန်ကြိး မာဒုန်ဆွတ်ဆိုတာနဲ့ ဇာတ်လမ်းက ကောင်းပြီးသားဆိုတာ ခန့်မှန်းမိမှာပါ အခုကားကတော့ ဇာတ်လမ်းနာမည်အတိုင်းပါပဲ ဂိုဏ်စတားတစ်ယောက်ရယ် ရဲတစ်ယောက်ရယ် မကောင်းဆိုးရွားတစ်ကောင်ရဲ့ ဇာတ်လမ်းပါ သူတို့ ၃ ယောက် ဘယ်လိုများ ဆက်စပ်နေကြပါလိမ့် ချွန်းချောင်တောင်ပိုင်းမှာ ဆက်တိုက်ဆိုသလို ဖြစ်နေတဲ့ လူသတ်မှုတွေကို ကွင်းဆက်လူသတ်မှုအဖြစ် ဆက်စပ်မိတဲ့ ရဲစုံထောက် တစ်ယောက်..... မမျှော်လင့်ဘဲ ကွင်းဆက်လူသတ်သမားရဲ့ ဓားနဲ့အထိုးခံလိုက်ရတဲ့ လူဆိုးဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်...... လူသတ်သမားကို မိဖို့အရေး ပူးပေါင်းလိုက်ကြရဖို့ ဖြစ်လာတဲ့အခါ..... ရဲ နဲ့ လူဆိုး ပူးပေါင်းဖို့ရာ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား????? ကွင်းဆက်လူသတ်သမားကိုရော ဖမ်းမိပါ့မလား????? မှုခင်းဇာတ်လမ်းဖြစ်တဲ့အတွက် စလယ်ဆုံး လုံးဝစိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ် တစ်ကားလုံးကို အသည်းတယားယား ရင်တဖိုဖိုနဲ့ ကြည့်ရမယ့် ကိုရီးယားကားကောင်းတစ်ကား ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Credit Review Zawgyi ၂၀၁၉ တုန္းက ထြက္ရွိခဲ့တဲ့ မာဒုန္ဆြတ္ရဲ႕ ဇာတ္လမ္းေကာင္းတစ္ကားပါ Train to Busan ထဲက လူသန္ႀကိး မာဒုန္ဆြတ္ဆိုတာနဲ႔ ဇာတ္လမ္းက ေကာင္းၿပီးသားဆိုတာ ခန႔္မွန္းမိမွာပါ အခုကားကေတာ့ ဇာတ္လမ္းနာမည္အတိုင္းပါပဲ ဂိုဏ္စတားတစ္ေယာက္ရယ္ ရဲတစ္ေယာက္ရယ္ မေကာင္းဆိုး႐ြားတစ္ေကာင္ရဲ႕ ဇာတ္လမ္းပါ သူတို႔ ၃ ေယာက္ ဘယ္လိုမ်ား ဆက္စပ္ေနၾကပါလိမ့္ ခြၽန္းေခ်ာင္ေတာင္ပိုင္းမွာ ဆက္တိုက္ဆိုသလို ျဖစ္ေနတဲ့ ...
IMDB: 6.9/10 4272 votes
The Bros (2017) Unicode လီဆော့ဘုန်းနဲ့ လီဂျူဘုန်းတို့ဟာ ကိုယ့်အတွက်ပဲ သိကြတဲ့ တဘို့တည်း သမားတွေပါ၊ လီဆော့ဘုန်းက သုတေသန ဌာနမှာ စာသင် အလုပ်လုပ်ပါတယ်၊ မြန်မာပြည်မှာ ရတနာတွေ လာရှာဖို့ဆိုပြီး စက်ပစ္စည်းတွေကို အကြွေးနဲ့ ဝယ်ယူထားသူပါ၊ ဖြစ်ချင်တော့ မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ကြောင့် သူ့အကြံအစည်တွေလဲ ပျက်ကုန် ပြီး အကြွေးတပြုတ် တင်သွားပါတယ်။ တဖက်မှာလဲ လီဂျူဘုန်းက ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီမှာ အဝေးပြေးလမ်းဆောက်ဖိူ့ ကြိုးစားနေတာ တင်ပြမှု မှားလို့ဆိုပြီး အလုပ်ထုတ်ပြီး တရားစွဲခံရမလို ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီလို ဒုက္ခရောက်နေတုန်းကြီးမှာမှ သူတို့ အဖေက ရုတ်တရက်ဆုံးပါးသွားပါတယ်၊ စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ နှစ်ယောက်လုံး ဇာတိမြေကိူ ပြန်လာတဲ့ချိန် ကားပေါ်မှာ ရန်ဖြစ်ရင်း ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာနက ကောင်မလေး တယောက်ကို ဝင်တိုက်မိပါတယ်၊ အဲ့ဒီ ကောင်မလေးကို ပြန်ကူညီရင်း နဲ့ သူတိုမျိုးရိုးရဲ့ အကြီးမားဆုံးလျှိူ့ဝှက်ချက်တွေကို သိလိုက်ရတဲ့ အခါမှာတော့....... ကောင်မလေးကရော ဘယ်သူလဲ? ဒီ အိမ်ကြီးထဲမှာကော ...
Murderer (2014) ဒီႏွစ္ပိုင္းမွာ ပရိသတ္ေတာင္းဆိုမႈ အားေကာင္းေနသူ Ma Dong Seok ရဲ႕ Drama/Thriller ဇာတ္ကားတစ္ကား တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ ။ Murderer လို႔အမည္ေပးထားတဲ့ ဒီဇာတ္ကားမွာ Ma Dong Seok ကို ေသြးေအးလူသတ္သမား Joo Hyub အျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ရမွာပါ ။ Joo Hyub ဟာ ကြင္းဆက္လူသတ္သမားဘဝကို အတိတ္မွာခ်န္ခဲ့ၿပီး မထင္မရွား႐ြာေလးတစ္႐ြာမွာ သားျဖစ္သူ Yong Ho နဲ႔ ဇာတ္ျမဳပ္ေနထိုင္ခဲ့ပါတယ္ ။ တစ္ေန႔ေတာ့ Yong Ho တို႔ေက်ာင္းကို ေက်ာင္းသူသစ္ေလး Ji Soo ေရာက္လာခဲ့ၿပီး Yong Ho နဲ႔ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္ ။ စကားနည္းလြန္းၿပီး တစ္ျခားအတန္းေဖာ္ေတြနဲ႔ အေပါင္းအသင္းမလုပ္တဲ့ Ji Soo ဟာ လူသတ္သမားတစ္ေယာက္ေၾကာင့္ စိတ္ဒဏ္ရာရၿပီး လူေတြနဲ႔ခပ္ကင္းကင္း ခြာေနခဲ့တာပါ ။ ဒါေပမယ့္ သူ႔ကို စိတ္ဒဏ္ရာေပးခဲ့တဲ့ လူသတ္ေကာင္က Yong ...
IMDB: 4.6/10 19 votes